समाचार टिप्पणी ‘केपी ओलीहरू’ ले पत्रकारलाई पढाएको पाठ ‘हिजो राजा भएको बेला कस्तो भाषा प्रयोग हुन्थ्यो गइबक्सियोस्, ज्यूनार गरिबक्सियोस्। अब त जानुस्, खानुस्, पनि भन्न छोडिसकिएको छ,’ ओलीले भने, ‘अब त पत्रकारहरू गए, खाए लेख्न थालेका छन्। हाम्रो संस्कृति र सभ्यता यस्तो छैन।’ हलभरिका पत्रकारलाई उनले सोधे ‘तपाईंहरूले यस्तै लेख्नुहुन्छ हैन?’ र, ती पत्रकारहरू ताली पिट्दै हाँसे। धैर्यकान्त दत्त
आन्दोलनले सडक तात्दैछ, कांग्रेस भने बैठकमै अलमलियाे
चुनावको तयारीमा जुट्ने वा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि सडक आन्दोलनमा जाने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र देखिएको विवादको निर्क्याेल गर्न सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सर्दै गएपछि झनै अन्योल बढेको छ। धैर्यकान्त दत्त
प्रचण्डहरूको हिंस्रक भाषणले जन्माएको भय
खुलेर नभने पनि प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले माघ ९ गतेको विरोध प्रदर्शन उग्र बन्नसक्ने संकेत दिएको छ। प्रचण्डमात्रै हाेइन त्यही कार्यक्रममा अर्का नेता झलनाथ खनालले ९ गतेको आन्दोलनका क्रममा ‘राजधानीलाई अस्तव्यस्त पार्ने’ भन्दै आराजक भाषण दिए। धैर्यकान्त दत्त
‘बलिदानी’ का १४ वर्ष : के चाहेको थियो, के पायो मधेसले?
मधेस आन्दोलनको १४ वर्ष पुगिसक्दा नेपालले संघीयता पाउनु ठूलो उपलब्धि रहेको राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन्। ‘संघीयता मधेसले मागेको थियो र मधेस आन्दोलनकै बलमा प्राप्त भयो पनि,’ लाभ भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलनले पाएको यो ठूलो उपलब्धि मलाई लागेको छ।’ धैर्यकान्त दत्त
विवादित अवस्थामा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरूले मान्यता पाउँदैनन्
पार्टी एकतापछि कायम संख्यालाई नै निर्वाचन आयोगले आधार बनाउँछ। आयोगले त्यही संख्याको बहुमतलाई नै आधार मानेर आधिकारिकता प्रदान गर्ने हो, विवाद निरूपण गर्ने हो। धैर्यकान्त दत्त
सर्वाेच्चमा ओलीकाे दादागिरी : बुझाएको फाइल फिर्ता लैजाने, न्यायाधीशहरूलाई रातिराति निवासमा बाेलाउने
भारतका ती दुवै मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग अन्तर्वार्ता लिँदा लगभग एकैखाले प्रश्न सोधेका छन्। केहीलाई छोडिदिने हो भने जी न्युजका सुधीर चौधरी र विअनकी पालकी शर्मा उपाध्यायले ओलीलाई सोधेको प्रश्न लगभग समान छन्। धैर्यकान्त दत्त
संविधानविद तथा कानुनका जानकारहरू प्रतिनिधिसभा विघटन भएर निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा विद्यमान सरकार स्वतः कामचलाउ हुने बताउँछन्। धैर्यकान्त दत्त
‘प्रधानमन्त्री त चुनाव प्रचारमा लागिसक्नुभएको छ, हामी किन सुतेर बस्ने? अब गाउँगाउँमा गएर कार्यक्रम गर्नुस्। चुनाव भए त्यसका लागि नभए आन्दोलनका लागि भए पनि काम लाग्छ’ धैर्यकान्त दत्त
ओलीको मधेश ‘आलाप’
पार्टीभित्रको आन्तरिक लफडामा फसेका ओली अहिले फेरि एकपटक मधेशलाई सम्झिन थालेका छन्। धोती जुलुस र मैथिलीमा सम्बोधन गरेर किन नहोस् मधेशप्रति आफ्नो सदाशयता देखाउन उनी जुटिसकेका छन्। धैर्यकान्त दत्त
संसदमाथि नै सबभन्दा पहिले आघात पुर्‍याइएको छ। समयअगावै प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनु आफैंमा एउटा ठूलो दुर्घटना हो। यसमा राज्यको खर्च पनि धेरै लागेको हुन्छ, श्रम पनि लागेको हुन्छ। जनता पनि कतिपय ठाउँ मारिने अवस्था आउँछ। मर्ने अवस्था हुन्छ। धैर्यकान्त दत्त
केही दिनअघि काठमाडौंको कार्की ब्यान्क्वेटमा सुदूरपश्चिमस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिम अब आफूहरूको कब्जामा हुनुपर्ने बताएका थिए। धैर्यकान्त दत्त
जसपाभित्र किन उब्जिँदैछ असन्तुष्टि?
अहिले जसपाभित्र तीव्र खटपट देखिन थालेको छ। एकता प्रक्रिया नटुंगिँदै पार्टीभित्र असन्तुष्टिहरू देखिन थालेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको किचलोको प्रभाव जसपामा पनि देखिन थालेको एक नेताले बताए।अजेन्डामा कुरा मिले पनि सैद्धान्तिक मतभेदका कारण पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिन थालेको जसपा नेताहरू बताउँछन्। धैर्यकान्त दत्त
ओलीले गर्लान् प्रदेशसभा विघटन?
प्रदेशसभा विघटन गर्ने कदम उठाइए दुर्भाग्यबाहेक अरू केही नहुने कानुनविदहरू बताउँछन्। संविधान नै लिकमा नरहेको अवस्थामा आफूखुसी जथाभावी गरेमात्र प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने अन्यथा तत्काल अर्को कुनै बाटो नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। धैर्यकान्त दत्त
ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दीको पहल!
‘संसद विघटनविरुद्ध राजनीतिक दलमात्र होइन नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू एकजुट छन्,’ नेपालले भने, ‘अहिले आइपरेको संकट टार्न सबैले हातेमालो गर्नुको विकल्प छैन।’ धैर्यकान्त दत्त
'अरू के नै बाँकी रह्यो र, कांग्रेसको ठाउँ सडकै हो'
यतिबेला एउटामात्र विकल्प मैले देखेको छु। हाम्रो कर्म संघर्ष हो, हामीले अपेक्षा गरेको अदालतले न्याय गर्छ भन्ने हो। किनभने, यो यति खुला छ कि अदालतले मिहिनेत नै गर्नुपर्दैन। संविधान पल्टाइदिए पुग्छ। संविधान पढिदिए पुग्छ। श्रीमानहरूले संविधान पढिदिनुभयो भने यो संविधान पुनर्स्थापना हुन्छ, हुन्छ। धैर्यकान्त दत्त